घरको वातावरण राम्रो नहुँदा वालवालिका कुलतमा फसेका छन् – Janaubhar
घरको वातावरण राम्रो नहुँदा वालवालिका कुलतमा फसेका छन्
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ६, २०७५ | 198 Views ||
प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ
यहाँ भर्खरै जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर दाङ आउनु भएको छ । दाङको समग्र सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पाउनु भयो त ?
समग्र देशको अवस्था हेर्दा दाङ शान्तिपूर्ण जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । म प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि यहाँको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरे । समग्रमा यहाँको शान्तिसुरक्षा राम्रो नै देखिन्छ ।
यहाँको सुरक्षा चुनौति के पाउनु भएको छ ?
दाङमा खासै चुनौति पूर्ण अवस्था त केही देखिन मैले । यहाँ पहिले गुण्डागर्दी थियो । तर, अहिले गुण्डागर्दी नियन्त्रण भएको अवस्था छ । प्रहरीको सक्रियतामा गुण्डागर्दी नियन्त्रण भइसकेको छ । र पनि जुनसुकै समयमा गुण्डागर्र्दी मौलाउन सक्छ । प्रहरीले एक्सन गरेन भने जतिबेला पनि गुण्डाहरु सल्बलाउन सक्छन् । यहाँको चुनौति गुण्डागुर्दी नै हो । यहाँ लागू औषध ओसारपसार तथा प्रयोग देखिएको छ । जाँडरक्सीको प्रयोग गरेर झै झगडा गर्ने क्रम पनि छ । सा¥है चुनौतिपूर्ण अबस्था भने छैन ।
दाङ भारतीय सिमासँग जोडिएको जिल्ला हो । सिमा क्षेत्रबाट लागू औषध ओसारपसार तथा अन्य अपराधिक गतिविधि हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
यो त तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । दाङमा लागू औषध ओसारपसार भइरहेको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।
लागू पदार्थ ओसारपसार बढ्नुको कारण के देख्नु हुन्छ तपाई ?
उत्तर तर्फबाट लागू औषध झरेको देखिन्छ । यहाँबाट अन्यत्र गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन् । यहाँकै मान्छेहरुनै कुलतमा फसेको जस्तो देखिन्छ ।
तपाईहरु अनुसन्धानमुलक ढंगले अपराधको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ । लागू औषधको प्रयोग किन भएको होला ?
यसको मुख्य कारण भनेको अभिभावकले आफ्ना वाल,वच्चालाई राम्रोसँग नहेर्नु नै हो । यसको बारेमा आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रोसँग सचेत नराउनुनै मुख्य हो । छोराछोरीसँग सामिप्य नहुने,उनीहरुसँग उचित छलफल नहुने र घर,परिवारबाट भातृत्व प्रदान नहुने कारणले गर्दा लागू औषधको प्रयोग भइरहेको छ । शहरीकरण भइरहेको छ । सबै आ(आफ्नो काममा व्यस्त छन । छोरा, छोरीले के गर्दै छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान कस्तो छ भनेर अभिभावकले ध्यान नदिने प्रचलन छ । मुख्य कारण भनेकै घर परिवारले ध्यान नदिनु हो । जसको कारणले लागू औषधको प्रयोग बढेको देखिन्छ । संसारमा जहाँ पनि यस्तै देखिन्छ । जहाँ घरको वातावरण राम्रो हुन्छ,उनका छोराछोरी सहि बाटोमा लागेका हुन्छन । वा आमा,छोरा र छोरी साथै बस्ने साथै खेल्ने र साथै खाने वातावरण छ भने त्यहाँ लागू औषधको प्रयोग भएको पाइदैन् । त्यहाँ अन्य कुनै पनि खराव गतिविधि नै हुँदैन । हाम्रो समाजमा घरभित्रको वातावरण राम्रो बनाउन जरुरी छ ।
लागू पदार्थ ओसारपसार रोक्नका लागि प्रहरीको भूमिका हुन्छ नै साथै प्रयोग रोक्नका लागि कुनकुन सरोकारवाला पक्षहरुको के भूमिका रह्यो भने हाम्रा वाल, वालिकाहरु लागू औषध प्रयोग तर्फ उन्मुख हुँदैनन् ?
मुख्य त परिवार र पारिवारिक व्यक्तिलाई सचेत बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा लागू औषधमा फसिसकेका छन भने उनीहरुलाई त्यो लतबाट निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई उपचार गर्नुपर्छ । लागू औषध कसैले खाइरहेको छ भने त्यसलाई लुकाएर राख्नु हुँदैन । त्यसलाई रोक्न सकेनौ भने भविष्यमा भयानकस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । जसरी तपाई रोग लाग्यो भने दुःख पाउनुहुन्छ,त्यसैगरी घरमा एउटा लागू औषध प्रयोग कर्ता भयो भने उसले समग्र घर र समाजलाईनै रोगी बनाउँछ । त्यो बच्चालाई उपचार गरेर बाहिर निकाल्ने नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।
पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा वलात्कारका घटना बढेको देखिन्छ । साना वालिकाहरु पनि वलात्कृत भएकाछन् । बलात्कारमा ७०÷७५ वर्ष उमेरका वृद्धहरु नै संलग्न भएका कतिपय उदाहरणहरु हाम्रा सामू छ । यसले हाम्रो समाजको मनोवृत्तिलाई कस्तो देखाउँछ ?
त्यतै तर्फ गएको देखाउँछ ।
सामाजिक विकृति बढेको छ । छाडापनहरु छ । सबै चीजहरु खुल्ला छ । स्वतन्त्रताको नाममा खुल्ला कुरालाई प्रसय दिने काम भइरहेको छ । खुल्ला भइसकेपछि मान्छेहरु विकृत मानसिकता तर्फ उन्मुख हुन्छ । विकृत मानसिकताले उत्पादन गर्ने भनेकै विकृतिपूर्ण काम हो ।
खुल्ला समाजको कुरा त गर्नुभयो । कतै कानूनी रुपमा दोषीलाई उचित कार्वाही नहुँदा यस्तो समस्या आएको त होइन ?
कानुनी रुपमा त हामी कडा नै छौं । जर्वजस्ती करणीमा पहिले पनि कानुन फितलो भएको होइन ।
त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन कि ?
त्यसको कार्यान्वयन पनि व्यवहारिक नै भएको छ । यस विषयमा हामीले कति बलात्कार रियल हो कि होइन भनेर पनि जानुपर्छ । सबै बलात्कार रियल बलात्कार होइनन् ।
भनेपछि समाजमा अहिले बाहिर आएका बलात्कारका घटना रियल होइनन् ?
तपाईले गलत बुझ्नु भयो । मैले सबै भनेको होइन । कतिपय मात्रै रियल घटना होइनन भनेको ।
तपाईले भनेका ती ‘कतिपय’ घटनाहरु के कारणले आउँछन् ?
तपाईले समाजतिर अध्ययन गर्नुस् । म तिर होइन ।
तपाईहरुले त्यसतर्फ अध्ययन गर्दा के देखियो ?
त्यो त तपाईले समाजमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पाटोबाट अध्ययन गर्ने कुरा त भयो । सुरक्षा निकायबाट कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ? भनेको मैले ।
हामीले आएपछि अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता गर्छौं । सामाजिक क्षेत्र तर्फ मैले बोल्दिन् । यो विषयमा मैले बोल्ने कुरा होइन । सामाजिक अभियन्ता लगायत विभिन्न सामाजिक ठेकेदारहरुछन् । उनीलाई सोध्नुस न । सबै कुरा मलाई सोधेर हुन्छ त । शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान बारेमा पो मलाई सोध्ने हो ।
अपराध अनुसन्धान अन्र्तगत तपाईहरुले पनि त केही पाउनु भयो होला नि ? किन यसरी बलात्कारका घटनाहरु सिर्जित हुन्छन भनेर ?
हामीले भेटे जति सबैलाई अदालत लगेकै छौं । अदालत लगेपछि पिडित पक्षलेनै होइन भन्दिन्छ । पहिले हो भन्छ पछि होइन भन्छ ।
कतै यो विषय आर्थिक लेनदेनमा मिल्ने गरेको त छैन ?
आशंका हामीले पनि त्यहि गरेका छौं ।
दाङमा विचौलियाहरुको समस्या पनि छ । समाजलाई विचौलियाबाट मुक्त गर्नका लागि समाजका विभिन्न पक्षको भूमिका हुन्छ । यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका के रहन सक्छ ?
हामीसँग विचौलिया हुँदैन् । जुन,जुन निकायका विचौलियाहरु हुन्छन ती निकायले रोक्नुपर्ने । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा विचौलिया छन भने त्यसलाई रोक्ने हामीले हो । सायद हामीमा त्यो विचौलिया छैन । अन्य जुन निकायमा विचौलिया छन ती क्षेत्रका कार्यालयहरुले रोक्ने हो ।
प्राकृतिक स्रोत, साधन उत्खननमा केही पक्षले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरेको देखिन्छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो कसले दिने हो । कसले नियमन गर्ने हो र कसले कार्वाही गर्ने हो । त्यो कानुनमा हेर्नुस् । अनि त्यसैलाई सोध्नुस् ।
अवैध रुपमा ओसारसार हुन थाल्यो भने प्रहरीको भूमिका के हुन्छ ?
हामीले भेटेको कारवाही गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान हो । गर्न त हामीले काठ तस्करी भएपनि रोक्छौं । तर, काठ तस्करीका पछि कुद्ने काम हाम्रो होइन । त्यो वनको काम हो । सडकमा पनि विभिन्न काम भइरहेको होला त्यो हाम्रो काम होइन । भन्सार छली भएको छ भने त्यो रोक्ने भन्सारको काम हो । हामीले भेटेयौं भने पक्रिन्छौं । तर, त्यसको पछाडी जाने प्राइम जव होइन ।
अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा ।
Prevखसीको टाउको देखाएर भेडा र बाख्रा बिक्री
Nextजनताको चित्त दुखाउने काम नगर